Izindaba - Ukuhlukaniswa nokusebenza kwemikhiqizo yokuhlanza amahhotela
Okuzenzakalelayo Shoe Polisher
Imfucumfucu Yenkunkuma / Umgqomo Wemfucuza
Inqola Yokugcinwa Kwezindlu zehhotela
Ipulasitiki Yokuhlanza Ipulasitiki
I-Liquor Trolley yehhotela
Inqola Yehhotela Lezimpahla
Ukwahlukaniswa nokusebenza kwemikhiqizo yokuhlanza amahhotela
Njengoba sonke sazi, ukusebenza kwehhotela akunakwehlukaniswa nokuhlanzwa, ihhotela elihlanzekile futhi elinethezekile likulungele kakhulu ukuvakasha kwasekhaya, linikeza abantu imizwa emnandi. Manje kunamanye amahhotela angahlanzekile ngokwanele. Ngakho-ke ukuhlanza kubaluleke kakhulu kumahhotela. Phakathi kwabo, imikhiqizo yokuhlanza idlala indima enkulu.
Izinsiza zokuhlanza amahhotela zingahlukaniswa ngezigaba ezimbili zemikhiqizo, amathuluzi wokuhlanza nawokuhlanza. Izindlu zokuhlanza amahhotela ngokuvamile zifaka i-wax engezansi, i-wax engaphezulu, ifenisha yefenisha, i-carpet cleaner, i-toilet cleaner, i-disinfectant, ingilazi, i-wangaphandle yokuhlanza udonga, i-brightener, i-air freshener, i-degreaser, amanzi okugeza amatshe, i-sanitizer yezandla, i-powder yokuwasha, i-derusting acid, i-kitchen cleaner kanye eminye imikhiqizo yokuhlanza amahhotela. Badlala izindima ezahlukahlukene ezintweni ezahlukahlukene. Amathuluzi wokuhlanza amahhotela ikakhulukazi afaka i-push push eyomile, i-mop mop, umshanelo, ifosholo lodoti, ibhulashi lokuhlanza, i-push scraper, induku ye-telescopic, i-suit yokuhlanza ingilazi, ibhodlela le-spray, intambo yokuphepha, isikhwama sothuli, njll. Ngakho lapho sihlanza amahhotela , sidinga ukuqonda izindlela ezithile ezilungile. Vumela abasebenzi basebenzise amathuluzi wokuhlanza ahambisanayo kahle nangempumelelo.
Okokuqala, izinto ezahlukahlukene kufanele zithathe izinto zokuhlanza ehhotela ezihambisanayo ekuhlanzeni nasekulondolozeni. Njengokuthi: imihlobiso yengilazi, kuyadingeka ukuthi ukhethe amathuluzi wokuhlanza ingilazi kanye nengilazi; Izesekeli zensimbi engenasici, i-ejenti yesondlo sensimbi engagqwali; Ifenisha yokhuni, ubucwebe kufanele bukhethe i-wax yefenisha nezinye izinto zokuhlanza.
Ngemuva kwalokho, inhlanzeko esegumbini lezivakashi ifaka obhavu, izindlu zangasese, izindishi, izinkomishi, izingubo zokulala nokunye. Le mishini kanye nezinsizakusebenza ezixhumana ngqo nezivakashi kumele zihlanzwe, zibulawe amagciwane, kufakwe ezinye futhi zigcinwe nsuku zonke ngemuva kokuba izivakashi zizisebenzisile. Kungale ndlela kuphela lapho izivakashi zingazisebenzisa ngokucophelela.
Okwesibili, ukuhlanzwa kwamakamelo ezivakashi kuyinkimbinkimbi, kufaka phakathi ukuqoqwa kwelineni elingcolile, ukuhlanza indawo, ukuhlanza phansi, ukuphathwa kwemfucuza, insizakalo yokwakha imibhede, ukuhlanza izindlu zangasese, ukulala embhedeni ebusuku, njll. qedela ukuhlanzwa kwegumbi ngesikhathi esinqunyiwe, bese uqinisekisa insizakalo esezingeni eliphakeme. Esikhathini esiphakeme sokuhlala kwehhotela, isikhathi sokuhlanza igumbi ngalinye sizophuthuma kakhulu, futhi imvamisa yokuhlanza izobe iphakeme. Ngakho-ke, kubaluleke kakhulu ukuthi abasebenzi bokuhlanza babe nemoto yesevisi yasekamelweni enamandla amakhulu, ukusebenza okuqinile, ukukhanya nokulula.
Ukuhlanza akuyona nje imizamo engenhla, kodwa futhi kungumsebenzi omuhle wangempela. Kungokwenza umsebenzi omuhle ekuhlanzeni amahhotela kuphela lapho singavumela izivakashi ukuthi zize ngokuqhubekayo. Yize ukudla kubaluleke kakhulu, insizakalo ibaluleke kakhulu. Kukhona isisho esithi isivakashi nguNkulunkulu, futhi umholo wethu uvela kubo.
Isikhathi Iposi: Jul-03-2021
Igumbi 1606, HUADING BUILDING, NO.2368 ENTSHONA, ZHONGSHAN UMGWAQO, ISIFUNDA SE-XUHUI, SHANGHAI CHINA
Izinkinga ezivamile ezifihliwe zokulala ehhotela
Ukuhlukaniswa nokusebenza kwehhotela clea ...